Vhidhiyo nyowani Apple Shot pa iPhone 13. Ongororo VI: Movie Magic | IPhone nhau
Mune ino kesi, iyo Cupertino kambani inotangisa vhidhiyo nyowani yeiyo "Shot pa iPhone" akateedzana maanoratidza maitire aungaita kuwana zvakawanda kubva kune "nezvimwe zvekuwedzera pamhedzisiro" uye kamera pane iyo nyowani iPhone 13 uye iPhone 13 Pro.
Yakatumidzwa, Kuedza VI: Movie Mashiripiti, iyi vhidhiyo nyowani yakaburitswa naApple inoratidza maitiro ekuti uwane zvakanyanya kubva kune ane simba makamera anowedzerwa pachigadzirwa. Izvo zviri pachena ndezvekuti neimwe nzira, zvimwe zviwanikwa uye yakawanda chishuwo mifananidzo inoshamisa inogona kutorwa.
Isu tinogovana pano vhidhiyo yakaburitswa naApple mavanoratidza simba reiyi iPhone maererano nemakamera na tsananguro uye madiki ekupfura eiyi pfupi yeSainzi ngano:
Dong Hoon Jun naJames Thornton vanogona kuonekwa vachitsanangura maitiro avakafotora iyi yesainzi pfupi nemakamera eiyo itsva iPhone 13. Aya inyanzvi mumunda uye nekudaro zvakajairika kuti mhedzisiro yacho inoshamisa. Isu vamwe vanhu vanofa vanogona kutora mukana wehumwe hunyengeri hunoonekwa mumifananidzo iyi yemavhidhiyo edu, kunyangwe hazvo zvakaoma kusvika pamatanho akawanikwa mune ipfupi.
Mushandirapamwe weApple we "Shot on iPhone" wave mucherechedzo mukugadzira uye mavhidhiyo ekushanda kwemakore mazhinji, inyatsoita nzira dzakawanda uye ndezvekuti mukuwedzera pakuratidza zvinogona kuitwa nekhamera ye iPhone yedu kunyangwe isiri iyo iyo yazvino modhi yakaburitswa. Aya mavhidhiyo anosimbisa iro rakakura basa uye hunyanzvi hwevashandisi uye nyanzvi vanoita rudzi urwu rwezvikabudura nefoni mbozha, chimwe chinhu icho makore mashoma apfuura chaive chisingafungidzike.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Vhidhiyo nyowani Apple Shot pa iPhone 13. Ongororo VI: Movie Magic
Yave kuwanikwa paApple TV +, Invasion, Apple's new science fiction series